Cuntojebiye: Macaamiisha u beddelo Danjirayaal Sumcad Bulsheed! | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 27, 2014 Axad, Oktoobar 26, 2014 Douglas Karr
Jeexjeexe waa barnaamij kugu abaalmarinaya dalabyo bilaash ah iyo qiimo dhimis qaas ah oo loogu talagalay inaad sawirro ku dhajiso shabakadahaaga bulshada. Ganacsiyadu waxay ku biiri karaan bilaa lacag, iyagoo dejinaya dalabyo ay isticmaaleyaashu ka ogaan karaan barta. Si loo furto dalabka, waa inay kaliya la wadaagaan sawir dhiirrigelinaya aasaaska shabakadooda warbaahinta bulshada.
Chit (qeexitaan) - Dalab gaar ah, fursad lacag badbaadin, dhiirigelin, ama kuuboon laga heli karo oo keliya barnaamijka 'Chitter'.
Jeexjeexe waa barnaamij helitaan ku saleysan goob laga heli karo Android iyo iOS. Adoo la wadaagaya sawirrada, macmiilkaagu hadda wuu suuq geynayaa oo wuxuu kobcinayaa alaabtaada, adeegyadaada, iyo khibradahaaga. Tani waxay si baaxad leh u kordhin kartaa gaadhitaankaaga iyo aragtidaada ku saabsan warbaahinta bulshada, waxay yareyn kartaa kharashka cusub ee helitaanka macaamiisha, waxayna kordhin kartaa sii-haynta macaamiisha
Jeexjeexe waa u bilaash ganacsiyada inay isdiiwaangeliyaan oo waxay qaadataa daqiiqado yar in la dejiyo. Waxaad xor u tahay inaad soo dejiso inta badan Qaybo sida aad jeceshahay inaad uga muuqato meheraddaada ama ururada natiijooyinka bandhigga 'Chitter' ee barnaamijka moobiilka. Jeexjeexe wuxuu leeyahay astaamo qiimo leh oo ka dhigaya dalabyada maddooyinka raadinta, helitaanka cinwaanada emaylka isticmaalaha oo fiiri Analytics tirada dadkaaga macaamiisha ah.
Eric Dye wuxuu wareysi weyn la yeeshay Seth Knapp, oo ah Sarkaalka Khibradda Sare ee Chitter, oo ku saabsan Shabakada Ganacsatada Podcast.
Tags: doodiddau doodqallajiyeu doodista macaamiishadheeh ericdhiirigelintau doodista tafaariiqdaistaraatiijiyada warbaahinta bulshada ee tafaariiqdawadaagista bulshada tafaariiqdaseth knappwadaagista bulshada
Waxa Aan Sameynay Si Loo Kordhiyo Ka Qeybgalka Twitter